Home Wararka MW. Farmaajo oo ku wajahan Imaaraadka, xiriirka Qatar iyo Turkiga oo gabaabsi...
MW. Farmaajo oo ku wajahan Imaaraadka, xiriirka Qatar iyo Turkiga oo gabaabsi ah. (Xog Dheeri ah)
MW. Maxamed Cabdullahi Farmaajo aya ku wajahan magaalada Abu Dhabi ee dalka Imaaraadka Carabta horraanta bisha Janaayo ee sanadka 2019. Booqashadan aya la xiriirta socdaal uu bishan december 18 uu ku tegay Imaaraadka Madaxweynaha Eriteriya Isaiah Afawerki oo dadaal ugu jira sidii la isugu soo dhaweyn lahaa Imaaraadka & Soomaaliya.
Waxaa isi soo taraayay in uu gabaabsi ku jiro xiriirka Soomaaliya iyo wadamada Turkiga iyo Qatar, kaddib markii MW. Farmaajo uu cadaadis uga yimid madaxda Itoobiya iyo Eriteriya, kuwaaso aaminsan in aanay suurtagal noqoneyn isdhexgalka seddexda waddan haddii aanan la hagaajin xiriirka Soomaaliya iyo Imaaraadka.
Dowladda Soomaaliya aya heshiis la saxiixatay dowladda Sucuudiga heshiiskaas oo halis ku ah xiriirka Soomaaliya, Turkiga iyo Qatar. Heshiiskan oo uu saxiixay wasiirka arrimaha dibadda Axmed Ciise Cawad aya waxaa aad ula yaabay wadamada Qatar & Turkiga.
Socdaalka lagu wado in uu MW. Farmaajo ku tago Imaaraadka Carabta aya dhalin doona isqabqabsi ka dhex bilowda kooxda xukunka haysata, maadaama ay Fahad Yasin & Kheyre ay u janjeeraan dhanka dowladda Qatar. Fahad Yasin iyo RW. Kheyre aya bilaabay qorshaha isu diyaarinta doorashada lagu wado in aay Soomaaliya ka dhacdo sanadka 2020, taasoo dad odorasa siyaasadda ay sheegeen in MW. Farmaajo uu isku dayayo in si qasab ah uu dib ugu dhigo doorashooyinka isagoo garab ka helaya ciidamada dowladaha Itoobiya & Eriteriya.
Previous articleRa’iisul Wasaare Kheyre oo heshiis halis ku ah Qaxootiga Soomaaliyeed la galay dowladda Norway.
Next articleKooxo Burcad oo lagu qabtay Muqdisho
MW Farmaajo “Haddii aay Kenya faraha noo geliso Jubbaland xiisada Badda...